Ogaden News Agency (ONA) – Wariyihii goobta – Dibadbax balaadhan oo taariikhi ahaa ayaa ka dhacay dalka Sweden
Wariyihii goobta – Dibadbax balaadhan oo taariikhi ahaa ayaa ka dhacay dalka Sweden
Waxaa shalay oy taariikhdu ahayd 14kii Janaayo 2012 ka dhacay magaalada Stockholm dibad bax aad u weeyn oo ay isugu soo baxeen shacab weynaha ree Sweden. Shacabka oo dareenkooda uu aad u kacsanaa ayaa waxay soo buux dhaafiyeen goobtii lagu mudaharaadayay ayagoo wata boodhah & calamo astaan u ah. Waxay sidoo kale ku dhawaaqayeen erayo xamaasad sii dhalinaya soona jiidanaya dareenka dadkii agmarayay goobta banaanbaxa.
Dibad baxa oo ay soo qaban qaabiyeen Suxufiyiinta dalka & Saxafiyiinta aan xuduuda Lahayn, ayaa ugu baaqay Jaaliyada S/Ogadenia & ururka OYSU inay dibad baxa kala qayb qaataan . Jaaliyadaha S/Ogadenia & Ururada dhalinyarada (OYSU) oo firfircooni, karti & adkaysi dheeraada muujiyay ayaa laga dhigay hormuudkii hogaaminayay dibad-baxayaasha. Jaaliyadaha & Ururka dhalinta ee dibadbaxa kasoo qayb galay ayaa ka kala yimid wadamada Denmark, Finland & dhamaan dalka Sweden gudahiisa.
Waxaa ugu horayntiiba qudbad aad loo bogaadiyay ka soo jeedisay goobta banaanbaxa Maj Wechselmann oo ah Suxufiyad da’weyn aadna looga yaqaano dalka Sweden ahna Suxufiyiinta aadka loo qadariyo, Waana Suxufiyadii soo saartay Filmkii Lundin Oil.
Suxufiyada oo meela badan taabanaysa warbixin dheerna soo jeedisay ayaa waxay aad ugu nuux-nuuxsatay xaalada Ogadenia & shirkadaha shidaalka. Waxay si waafiya uga war bixisay xiligii ay Lundin oil bilowday shidaal qodista Ogadenia oo sheegtay inay bilowday 2004-tii, waxay sidoo kale weydiisay dadweynihii madasha isugu yimid Ogadenia sida ay u egtahay & waxa ayka malaynayaan? Marwada oo hadalkeeda sii wadata ayaa dad weynihii u sharaxday xaalada Ogadenia waxayna tidhi sidatan; ” Ogadenia waa wadan uu ka jiro jidh dil, kufsi & walibana xasuuq oo laga gubo hoygoodii shacabka. Waxaa intaa u dheer laga soo bilaabo 2007kii shacabka Ogadenia xukuumada Itobiya waxay ku haysay cuna qabatayn si ay gaajo ugu dhamaadaan. Melez asagoo shacabka kala lexe jecloonaya xabada ayuu rafaadkaa ku laayaa. Daqiiqadaha aan hada idin hortaagnahay inta shacab reer Ogadenia ah ee la laynayo ee dhimanaysa xisaab malahan, taasina waxay cadayn u tahay in xasuuqa ka jira Ogadenia uusan dhamaad lahayn.”
Waxay intaas ku dartay oo ay kusoo gabagabaysay; “Carl Bild oo ah wasiirka arimaha dibada hadaanu nahay muwaadiniinta reer Sweden waanu ka qadayna xukuumada kan lagu badalana wuu soo dayn wiilshanada ee Melez Zenawi arintaas cashar ha u noqoto.
Waxaa kadib codbaahiyaha lagusoo dhaweyay Gudomiyaha Jaliyada S/Ogadenia ee Sweden Mudane Abdinasir Gadhweyne oo asna kasoo jeediyay qudbad uu waxyaaba badan kaga hadlay. Gudoomiyaha ayaa yidhi; “Ogadenia waa meel laga xidhay Suxufiyiinta & dhamaan hay’adaha caalamiga ah, Sababtuna waxay tahay si aanan loo oganin dhibaatooyinka joogtada ah ee loogaysto shacabka S/Ogadenia. Xukuumada Ethiopia falalka waxuushnimada ahee ay u gaystaan shacabka Ogadenia waxaa ka mid ah inay degaanadooda ka raraan ayagoo u banaynaya shirkadaha shidaalka si ay dhulka uga gadaan. Waxaanse ogaysiinaynaa dawlada Sweden & wadamada dimoqradiyada ay ka jirto inay uga digaan shirkadaha shidaalka galitaanka ay galayaan Ogadenia.” Intaasna waxuu ahaa hadalkii Gudoomiyaha.
Waxaa kadib Microfonka lagu wareejiyay Gabadh da’ayr kana soo jeedisay qudbad qiima badan. Qudbadaa oo runtii ahayd mid aad u dheer isla markaana muhiimad weyn xambaarsan ayaan soo koobayaa. Ugu horeyn waxay gabadha hadalkeeda ku bilowday salaan kadibna waxay tidhi; ” Magaceygu waa Shahrezaad Faisal. Waxaan kamid ahay Ururka dhalin yarada S. Ogadenya ee Sweden. Ogaden waa dhul ay Ethiopia gumeysato oo nidaamka kaliya ee ka shaqeeya uu yahay, jirdil, kufsi, dhac, tuulooyinka oo la gubo, dil badheedh ah, iyo dhamaaan wax waliba oo lid ku ah xuquuqda baniaadamka.” Sharezaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa tidhi ” Xuquuqda biniaadmka ee aasaasiga ah maahan inuu ku jiro warqado yaala armaajo dhexdeeda meel kamid ah xafiisyada dowlada”.
Qoraalka gabdha oo runtii ahaa mid talo iyo tusaaleyn badan uu ka muuqday ayay kusoo gaba gabeysay hadal inta badan dadku ay aad ula dhaceen. Waxayna tidhi; ” Sweden waxay u baahan tahay wasiir arimo dibadeed aanan gacmaha wasaq ku laheyn, sidoo kale aanan dhiig ku laheyn. Ma dooneyno inan iska aamusnaano, iska rajo xumaano, iska jilcsanaano marka laga hadlayo xuquuqda biniaadamka”. Sharezad ayaa hadalkeeda ku soo gunaanuday . Carl Bild, (wasiirka Arimaha Dibada Sweden) Hadaanu nahay shacabka S/Ogadenia waanu soo jeednaa ee xadgudbka shirkada shidaalka Lundin oil ay Ogadenia ku hayso ha dayso.”
Dibad baxa oo ka bilowday bartamaha magaalada ayaa kadib lug lagu tagay Baarlamaanka, Shirkada shidaalka & Wasaarada arimaha dibada oo mid waliba la hor taagnaa in muda ah. Mudaharaadka ayaa socday 3 saacadood. Sidoo kale Dibad baxa kuma uusan ekayn Stockholm kaliya ee sidoo kale waxuu ka jiray magaalooyinka kala ah Götebory, Malmö, Helsingborg & brås.
Sikastaba ha ahaatee qadiyada Ree Ogadenia ayaa noqotay hadda mid qof waliba oo reer Sweden ah soo jiidata, sababtoo ah waxaad arkaysay Swidhish ku dhawaaqaya ama ku qudbaynaya Ogadenia ha xorowdo hana laga daayo xad gudubyada ka baxsan bini’adanimada ee lagula kacayo shacabka masaakiinta ah.
Waxay dareen kooda ku muujinayeen qudbadaha ay jeedinayaan & walibana boorarka ay wateen oo qaarkood ayku qorayeen (OGADEN WE ARE ASHEMED) isku soo wada duuboo Dibad bixii ayaa kusoo gababoobay guul saansaantuna ay ahayd Xoriyadii oo soo carfaysa.
iska noolaan ahaan jiray says:
waxaan ahay muwaadin udhashay dalka ay ITOOBIYA gumeysato ee Soomaali-Galbeed ama Ogaadenya. aniga oo shalay dhexmushaaaxaya oo shopping kujira maadaama ay ahayd maalin sabti ah oon aalaaba magaalada hoose usoo dhaadhaco maalinkaas ayaan badhtamaha magaalada Stokholm anoo iska socda oo lax dhukan col iyo abaar moog ah taf usoo idhi banaan bax aad uweyn oo kasocda santarka magaalada aan kunoolaa 18ka sano oonan mid lamid ah hada kaho ku arag asagoo sidaas oo kale ooga dhacaaya.
markaan arkay dad cadaan ah oo qadiyadda Ogadeenya si cad ooga hadlaya si badheedh ahna ugu dhawaaqaya waa in dadkaas waxay doonayaan loo ogalaadaa ayaan isweydiiyay anigu waxa aan kufillahay kolba haday dadyow kale ay ii doodayaan anigoo isu arkay iska noole waxa ay oogu yeedhi jireen nimanka aadka ugu dhaq dhaq dhaqaaqa Jabhadda ONLF waxaan mudaaharaadkaas dhexdsiisa ku go´aan saday in ay dullinimo tahay sidaan hada kahor kujiray wixii maanta kadanbeysana aan halganka Ogaadeenya ama SoomaaliGalbeed meesha igaga haboon kaga biirayo anoo waliba aaminsan in aan wax weyn uqaban karo.
waaa guul usoo hoyotay dhamaan shacabka somaliyeed ee ogadenia.
viva jwxo/jaaliyadaha/dhalinyarada/odayaasha/dumarka halgamaya gude iyo dibad.
guul iyo gobanimo says:
mashalaah guul iyo gobanimo waxan halkan uga mahad celinaya dhaman shacabka reer ogadenia ee halganka adag ku jira iyo inti ka so qaybgashay mudaharadka ee ajanabiga aha, waxa balan ah in melez iyo dabadhilifkisa aduunka indhahooga oo dhan lagu so jeedin doono inshalah,,,,,,,
waxan mid kale odhanaya ,,,,,,,,,,,,,,iska noole ayan aha,,,,,,,,,,, wa ilahay mahadi hadad hada ilahay ku tusay umadaadu inay cadab ku jirtay sababto aha markay dad ajnabi aha tageeren qadiyada dhulkeena inago u dhalanayna an ka hurudno ama la shaqayno cadawga,,,,,, ilahay haka dhigo ki dadkisa iyo diintisa iyo dhulkisba anfaca wccccccccccccccc banu ku lenahay to jwxo ,onlf halganka xaqa ah